संक्रमण बढेसँगै फेरि अनिश्चित पढाइ
– प्रेम लामा
काठमाडौं । देशभरका विद्यालय बन्द भएको तीन महिना पुग्यो । कोरोना महामारीको दोस्रो लहर आएपछि सरकारले १३ वैशाखदेखि विद्यालय बन्द गरिएको थियो । २८ वैशाखमा उच्च विन्दुमा पुगेको दोस्रो लहरको संक्रमण क्रमशः कम भएपछि विभिन्न तहका परीक्षाहरु सञ्चालन भए तर शैक्षिक संस्थामा भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन भएको छैन । तर पछिल्ला दिनमा दैनिक संक्रमितको संख्या उकालो लागेको छ र मंगलबार झण्डै ४ हजार पुगेका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार, कोरोना संक्रमणबाट हालसम्म १९ वर्षसम्मका ९१ बालबालिकाको मृत्यु भइसकेको छ । दैनिक १० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिकामा कोभिड–१९ को संक्रमण देखिने गरेको छ । संक्रमणको डरले लामो समय घरमै थुनिएका बालबालिकामा मानसिक असर पर्न सक्नेबारे अभिभावकहरु चिन्तित छन् ।
साथीसँगीसँग खेल्ने, रमाउने, सिक्ने, पढ्ने लगायत गतिविधि हुने मुख्य थलो विद्यालय कहिले खुल्छ भन्ने टुंगो छैन । तर जनस्वास्थ्य विज्ञहरुले भने संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकोले भौतिक रुपमा विद्यालय खोल्न हतार गर्न नहुने बताएका छन् ।
उनीहरुले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरी प्रभावकारी ‘प्रोटोकल’ र ‘गाइडलाइन’ तयार गरेर मात्रै विद्यालय खोल्न सुझाव दिएका छन् । विद्यालय बन्द रहेकै अवस्थामा पनि दैनिक १० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिकामा संक्रमण पुष्टि हुने गरेको भन्दै हचुवाको भरमा विद्यालय खोल्न नहुने उनीहरुको चेतावनी छ ।
संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुन जोखिम कायमै रहेकोले विद्यालय खोल्न उपयुक्त नहुने बताउँछन् । ‘कोरोना संक्रमण दर २० प्रतिशतभन्दा माथि छ’, भन्छन्, ‘जोखिमको हिसाबले यो उच्च नै भएकाले अहिले विद्यालय खोल्नु हतार हुन्छ ।’
धेरै वयस्क एवं प्रौढ मानिसहरु पहिलो तथा दोस्रो लहरमा संक्रमित भइसकेको र यही समूहका धेरैले खोप लगाइसकेकाले अब संक्रमणको बढी जोखिममा बालबालिका रहेको मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख डा. मदनकुमार उपाध्याय बताउँछन् ।
नेपालमा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर विद्यालय खोल्न सक्ने अवस्था उनी देख्दैनन् । त्यसैले सावधानी अपनाएर विद्यालय खोल्न सक्ने/नसक्नेबारे सरोकारवालाहरुले सुझबुझका साथ निर्णय लिनुपर्ने उनको सुझाव छ । डा. पुनका अनुसार पहिलो लहरको तुलनामा दोस्रोमा बढी संक्रामक र मृत्यु गराउन सक्ने भाइरसको नयाँ भेरियन्टका कारण बालबालिका धेरै प्रभावित बनेका छन् ।
निषेधाज्ञाका कारण लामो समयदेखि बालबालिका घरमै बस्नु, सामाजिक घुलमिल नहुनु र शैक्षिक संस्था पूर्ण रूपमा बन्द हुँदा समेत दैनिक झण्डै १० प्रतिशत बालबालिका संक्रमित हुनुलाई डा. पुन निकै खराब संकेत मान्छन् । अर्का संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. जनक कोइराला विद्यालयबाट बालबालिकाले भाइरस बोकेर घर–घरमा पु¥याउने ठूलो जोखिम हुने बताउँछन् । स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने सवालमा बालबालिका त्यति गम्भीर पनि नहुने उनको भनाइ छ ।
अहिले देखिएको भेरियन्टले बालबालिकालाई त्यति गम्भीर नबनाएको भएपनि एक घरबाट ५० औं घरमा संक्रमण सार्ने उच्च जोखिम रहेको उनले बताए । ‘बालबालिकाका लागि भ्याक्सिनको व्यवस्था छैन, तर कोरोनाको नयाँ/नयाँ भेरियन्ट देखा पर्ने सम्भावना प्रवल छ’, डा. कोइराला भन्छन्, ‘संक्रमण फैलिने क्रम पनि उच्च नै रहेको अवस्थामा विद्यालय खोल्दा गल्ती नै हुन सक्छ ।’
विदेशमा जस्तो पूर्ण स्वास्थ्य मापदण्ड पालन हुने अवस्था नेपालमा नरहेको उनको विश्लेषण छ । ‘सबै अभिभावकले खोप नपाइसकेको अवस्थामा बालबालिकाका लागि प्रयोग गरिने खोप अनुसन्धानकै अवस्थामा छ’, उनी भन्छन्, ‘जीवनभन्दा ठूलो कुरा अरु नभएकोले अहिले विद्यालय नखोली विभिन्न विकल्प अपनाएर पठनपाठनलाई निरन्तरता दिनु नै बुद्धिमानी हुन्छ ।’
अर्का संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. किरणराज पाण्डे भने भिडभाड हुने अन्य क्षेत्र खुला गरेर विद्यालय मात्र बन्द गर्नुलाई युक्तिसंगत देख्दैनन् । उनी स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर, भीडभाड कम हुनेगरी माथिल्लो तहको कक्षा सञ्चालन गर्दा हुने देख्छन् । भन्छन्, ‘त्यसपछि देखिने असरको आधारमा तल्ला कक्षाहरु खोल्ने/नखोल्ने निर्णय गर्न सजिलो हुन्छ ।’